Ngokuvamile, nokuvikela inkinga iba acute off-isizini, uma ileveli amanzi phansi ufinyelela ezingeni eliphakeme ukuthi kungaba abanikazi abaningi lasekhaya ukumangala kubuhlungu ngempela ngesimo amanzi emiphongolweni. Nokuvikela izindonga engaphansi kwesakhiwo kuyinto ngokuvamile iqala uphethwe sezizathu ezenza amanzi kukhona. Ziyini izimbangela eziyinhloko zalokhu umswakama kungaba: nokuvikela kwangaphambilini okwenziwe ngokungalungile noma ukungabi wako, ayilungile isicelo ubuchwepheshe izinto, noma izinga enganele.
engaphansi Manzi kubangela ukulahlekelwa isikhala sokusebenza kakhulu. Kukhona njalo ezingeni lelisetulu nomswakama, ukufingqa kanye isikhunta ezindongeni, kanye nephunga ezingemnandi isikhunta futhi dampness. Ngo engaphansi ezimanzi noma ukugcina mikhiqizo, njengoba isikhunta zabo ngendlela eyisimanga. Ingabe-ke ujike ubuyele ku isikhala sokusebenza ukuthi umnikazi izosebenzisa izidingo zabo? Kungenzeka. Kubalulekile ukuhlonza izimbangela manzi, futhi ukusebenzisa izinto ezifanele ukuthi uzosusa Igumbi yamanzi Ukungena.
Uma ngobugebengu ungangenisi amanzi engaphansi izindonga dampness zingavela khona. Ikamelo kungenzeka engaphezulu noma ngezansi level amanzi phansi, ngokulandelana, umsebenzi wokulungisa kumelwe kwenziwe kuye lokhu. izindlela ungangenisi amanzi angahluka bodwa kuphela endabeni yokukhetha izinto, ezihlinzekwa emakethe, kanye izinga yabo. Kodwa ubuchwepheshe sokunene munye kuphela.
Nokuvikela engaphansi izindonga kumele kwenziwe ngokuphelele uma itholakala ngezansi ezingeni phansi nesenzakalo yamanzi. Uma alolu kuphezulu, egumbini kungaba amanzi nje. Kubonakala ngokusebenzisa imifantu phansi futhi izindonga, kulesi simo sikhuluma kahle ophezulu komhlaba. Kumele kwenziwe nge ukukhethwa efanele izinto ezifanele. Ungangenisi amanzi engaphansi izindonga kulokhu kwenziwe ngochwepheshe oqeqeshiwe. Kwetheknoloji umsebenzi uchungechunge kuhlanganisa izigaba ezibalulekile:
- enifeza wokumba umgodi ukuze azungezwe engaphansi abadinga ungangenisi amanzi (ngaphandle);
- ukuhlanza izindonga zangaphandle odakeni;
- enifeza ukulungisa imisebenzi yangaphandle engaphansi izindonga, kanye ungangenisi amanzi amile ovundlile izindonga ukuthi ibuyiselwe.
Ngemva kwalokho ofuna ukubeka amanzi eduze ipherimitha elingaphandle engaphansi, uyobe ngokushesha ukuthatha snowmelt kanye amanzi emvula aphuma izindonga. Amanzi izinhlelo kufanele badedele emhlabeni azungezwe of isakhiwo, ezizohlinzeka imiphumela engcono.
Egumbini kukhona ezimbalwa ubuthakathaka kakhulu - amalunga omzimba emincane phansi futhi izindonga. Ezimweni eziningi, nje ngokusebenzisa lezi zindawo kakhulu eyenza umuntu acabange eseZwini komhlaba. Ngaphambi kokuqala i ungangenisi amanzi ngaphakathi, kubalulekile ukumpompa amanzi aphume engaphansi, uma kukhona iyatholakala.
Ungangenisi amanzi engaphansi izindonga ziyabonisa futhi nokubuyiselwa ukubekwa uphawu mpo futhi enezingqimba. Uhlobo lokuqala umsebenzi kumele kwenziwe nokusetshenziswa ezijulile lubricative nangokuvikela izinto. ungangenisi amanzi ovundlile kwenziwa phezulu kwethebula amanzi nge ukusetshenziswa komsebenzi eyenza umuntu acabange eseZwini is injected odongeni ngaphansi kwengcindezi ngokusebenzisa kumbiwa imithombo yamba ngendlela ethile. Lokhu uhlobo lomsebenzi kudinga Ochwepheshe onekhono kakhulu, njengoba kudinga ukusetshenziswa imishini ekhethekile. ungangenisi amanzi ovundlile ubizwa kufanele kubhekwe esigabeni esinzima kakhulu umsebenzi.
ukukhishwa Ofanele wonke umsebenzi kudingekile egumbini isiqiniseko wena ukuthi kukhona ngeke manzi namanzi. Kungenjalo, uhla eligcwele imisebenzi edingekayo ukuze afeze futhi ukuthi eyisicefe nje kuphela kodwa futhi ebiza kakhulu.
Scenic ngoba izibuya ukhonkolo: ukulungisa. Ukukhiqizwa samaphansi ukhonkolo kanye uphole. Iphansi Ukhonkolo nge uphole: Ubuchwepheshe
Mordovia: Izikhangibavakashi nokuzijabulisa